Qormo Xiiso leh: “Laacibka Berbera Sagaalka uga ciyaara oo reer Hargeisa soo dalbadeen si uu Maayar ugu noqdo”. kkkk…(Berbera ma hiil bay u baahan mise Hambalyo Qormadii 3aad) | Qaran News
Writen by Qaran News | 5:29 am 18th Dec, 2018
Waxaynu qormooyinkeeni hore kusoo xusnay waxyaalaha iyo Sababaha Berberi maanta Haadaanta ugu dhacday, Haddaba waxaa ay iswaydiintu tahay, Maxaa keenay waxyaabahaas aan soo sheegnay?
Ma si Lama filaana ayay u dhaceen mise ku talo gal?
Berberi miyaanay lahayn oo aanay joogin dad waxan dhacaya ee Foolxumida badan arkayaa? Maxayse ka eeganayaan arintan waji gabaxa iyo Yakhyakhsiga xambaarsan?
Meeye Golahii deegaanka ee loo soo doortay inay dadka Degmada Berbera metelaan? Iyo Su’aalo kale oo badan.
Maya dadka reer berbera maaha dad aan arkayn waxaas oo gef iyo gabbood fal ah. Xildhibaanadii, aqoonyahankii, Ahlu sharafkii, indheer garadkii iyo Da’yartiiba way joogaan oo kamay idlaan ee waxaa xaqiiq ah Markasta oo uu Maamul xumi meel qabsado waxaa uu xooga saaraa oo uu ku dedaalaa sidii uu u hirgalin lahaa Macangagnimadiisa iyo xukun qarqooshnimadiisa, Oo waxaa uu Bulshada u qaybiyaa, Qaybo iska soo horjeeda oo midna aanu kan kale arki karin ama maqli karin, Oo waxaa uu abuuraa Nacayb iyo kala irdhayn uu Bulshada walaalaha ah, uu kala dhex dhigo. IWM.
Haddaba Maalintii Maayar Cidin Berbera qabsaday kumuu iman jaceyl la jecelyahay, Aqoon uu qayrkii kaga hormaray iyo Fariidnimo uu ku kasbaday Maayarnimada ee, wuxuu Jaranjarada kusoo fuulay, Cunfi iyo nidaam qabyaaladeed, Oo uu markiisa horeba caan ku ahaa Mr Cidin. Wuxuu Duubka Derejada ku helay Tolaay yaa reer hebelaay, Reer Hebel baa inagu soo duulay, Xaalad abuur iyo qaylo dhaan dhiiladeeda wadatay oo aad u xun, walina Tiibuu wadaa oo wuuba sii kala tifay, Oo waxaad arkaysaa magaaladii Berbera ee laga xishoon jiray Qabyaaladda oo hada lagu xaragoodo.
Golahii deeganka ee ay ahayd inay xilka ku ilaaliyaan, lana xisaabtamaan oo shaqada ku daba galaan, mid walba meelbuu iskaga tiiriyey, waxaa uu ka dhigay qaar uu awood dheeraada siiyey Oo gacanta usii daayey si ay tooda ugu mashquulaan, qaar uu Saaxiibo dhaw ka dhigtay oo isaga u adeega. Iyo intii hoggaan sami wayday oo uu Faquuqay, iskastoo ay markay mudo Takoornaayeen ay intoodii badnayd u hoggaansameen si aanay Dhanwalba u seegin oo ay taas dambe isku qanciyeen.
Maayar Cidin, Reer berbera wuxuu u qaybiyey.
1- inuu reernimo iyo qabyaalad ku haysto.
2- inuu Laaluush iyo dhaqaale kula saaxiibo oo uu boobka u ogolaaday inay xeedhada gacanta la galiyaan, “Sida Ganacsatadii intii Wax haysatay oo kale”.
3- in iska danyar ahayd oo uu Shaqooyin yaryar siiyey oo bariiskooda ilaashada.
4- iyo in uu Cagta hoosteeda galiyey uuna ku amar kutaagleeyo oo ka cabsanaysa inay isagga iyo Maafiyada uu ku adeegtaaba ay dhibaato u gaystaan, Oo sugaaya uun inta uu meesha dhaafayo, ama iyaguba helayaan meel kale oo ay uga guuraan berbera.
Maayar Cidin, wuxuu samaystay dhalinyaro ay intooda badan hayb wadaagaan, Oo uu Mushahar ku siiyo sidii ay u buunbuunin lahaayeen, Oo ay Baraha bulshada uga faanin lahayeen, Wuxuu sameystay adeegayaal aan hawl kale ku mushahar qaadan oo u kala joogaa, Hargeisa, Burco, Berbera, gobolada kale ee Somaliland iyo dalka debadiisaba.
Wuxuu leeyahay darbaneyaal Sawira oo markiiba sawiradiisa u kala dira Daafaha dunida, iyagoo dadka ka iibinaaya IIDHEHYO raqiisa oo ah “Cidinbaa Geed laan ka jaray, Maayarkiiba, Cashuur dhaaf sameeyey, Maantana laamiguu istaagay, Caawana wuu khudbadeeyey, Maayarka Maayaradda, Ma cidbaa gaadhi karta, oo gaadhaysa. Bala bala bala” Iyo waxaan dhaamin.
Waxaaba uu Hadda marayaa Mashruuci ahaa “Anna I muuji oo Miidhayaha iga amaan adna Maal iyo Mushahar qaado”. In uu yidhaahdo anniga iyo Maayar Soltelco-da Hargeisa iskaaya garab dhiga oo waxaad tidhaahdaan “Laacibka Berbera Sagaalka uga ciyaara Mr Cidin oo reer Hargeisa soo dalbadeen si uu Maayar ugu noqdo”. Kkkkkkkkkkkkk.
Waxaa uu ku bixiyaa dhaqaalihii ummada, ee ay ahayd inuu danyarta ugu adeego.
QORMOOYINKEENA DAMBE WAXAYNU KUSOO QAADANAYNAA,
1- Dhaqaalaha ay Berberi hesho sanadkii cadadkiisa, iyo halkuu maro.
2- Berbera iyo Hargeisi ma yahiin laba magaalo oo lays garab dhigi karo waayo?
3- Hadii berbera dhaqaalaheeda 50% ka mida loogu shaqayn lahaa siday noqon lahayd intuu Cidin Haystay oo kaliya?
W/Q, EngAhmed Muse Mohamed